नदि किनारमा भेटिएकाे सुटकेश खोलेर हेर्दा सुरक्षाकर्मी नै परे दङ्ग! – PathivaraOnline
Home > अपराध > नदि किनारमा भेटिएकाे सुटकेश खोलेर हेर्दा सुरक्षाकर्मी नै परे दङ्ग!
admin April 12, 2018 अपराध 0
विदेशी पर्यटकहरुसंग एक पर्यटक स्वर्गदूत लोकप्रिय, हाल को महिना मा हिंसा मा एक वृद्धि देखेको छ कि अधिकारियों को दबाइको केशमा लडने को आरोपमा दोषी छ। तीन विनाशकारी निकायहरुमा सूटकेसहरुमा भरिएको शुक्रबार मा क्यान्सरमा फेला पर्यो, म्याक्सिकन रिसोर्टको शहर पछि घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ र प्रहरीले जनाएको छ कि एक बन्दूकलाई मारे। यो स्पष्ट थियो कि क्यारिबियन समुद्री किनारको नजिक र गहिरो खोजको बीचमा एक लिङ्क थियो जुन बिहीबार रातको नाटकीय शूटआउट थियो, जसले शहरको क्षेत्रलाई घृणा गर्यो।
विस्फोटित निकायहरु, जुन पहिचान भएको छैन, होटल क्षेत्र को किनारे मा एक मंगोदेव को नजिकै भेटयो, एक स्थानीय सुरक्षा अधिकारी, जो मामला को बारे मा कुरा गर्न को लागि अधिकृत थिएन, गुमनामता को शर्त मा एएफपी ले भन्यो।
केहि छ घण्टा पहिले, एक प्रहरी परिचालन अचम्म भयो जब संदिग्ध समूह को एक गिरफ्तारी को लागी उन अधिकारीहरु मा आगो खोल्यो।
त्यसपछि उनीहरूले शहरको केन्द्रमार्फत उच्च गतिको गतिमा पुलिसको नेतृत्व गरे, निवासीहरू र पासर्सबीलाई भयानक गोलियोंको एक पाल। एक संदिग्ध हत्या भएको थियो। चार जनालाई गिरफ्तार गरियो।
पैसा कमाउन कुवेत पुगेकि धादिङकि सुष्माकाे नाकबाट रगत बगेपछि…
४८ लाख तिरेर क्यानडा जान बिदाइको माला पहिरिएर निस्किएकि पार्वतीको एअरपोर्टबाट आयो यस्तो दुःखद खबर